PressReader - Ilanga: 2019-01-10 - Inkinga ngabasizi abangabuyi ngoJanuary
Inkinga ngabasizi abangabuyi ngoJanuary
Kuthiwa o-madam bayafukuzisa
Ilanga - 2019-01-10 - Ezesimanje - [email protected]
ITWETWE likaJanuary kaligcini ngokumataniswa nokutatazela kokubuyiselwa kwezingane esikoleni kodwa kubuye kuhambisane nengebhe eshiya o’madam’ bephithene amakhanda bezibuza ukuthi ngabe bayabuya yini o-anti abasiza emakhaya noma cha.
Ingxoxo ehamba phambili ngalesi sikhathi ikakhulukazi uma kuhlangene abesifazane abango- madam, kungaba sema- salon noma kuma- get together, yindaba yabasizi “nokuhlupha” kwabo.
Babodwa abakhala ngokungakhombisi intshisekelo kwabasizi uma benza umsebenzi, ukufuna ukulandelelwa nokuphukula.
Abanye baze bathi sebekhathele ukuba ngonogada okumele ukuba njalo uma u-anti eya ekhaya kumele bayobheka ukuthi ngabe uqoqe yonke yini imithwalo yakhe noma kukhona akushiyile.
Bathi lithi dwe itwetwe uma bebona kusele izingubo okuba yizona eziba yithenjana lokuthi basabuya.
Le ngxoxo ize yakapakela nasezinkundleni zokuxhumana lapho abanye sebeyenze ihlaya ngombhalo othi “Kungenzeka ukuthi u-anti akabuyi ngenxa yesinqumo asenzile sokulaxaza bonke abantu aba- toxic empilweni yakhe - okubalwa nawe mqashi.”
UKini Shandu, ongumethuli wohlelo lweTV, iDaily Thetha, uthinte esilondeni o- madam abaningi ebhala sakuncokola ukuthi “uyazi angithi ukuthi your helper akasabuyi noma uzenza ngathi awazi?”
Kuvuleke impophoma yezimpendulo abanye beveza ukuthi impela sebesitholile isiqinisekiso kubasizi babo ukuthi ngempela abasabuyi.
UKhumbuzile Ndlovu ongomunye wabaphawule kuleyo ngxoxo uthe indlela abaphathwa ngayo o-anti kweminye imizi yiyona mbangela ebenza bangabe besabuya.
Babodwa abebethi “kuthi huuuu” umoya njengoba bengabuyi ngoba vele ukuba khona kwabo kakunamehluko. USni Mathenjwa uthi indlela umsizi wakwakhe abesevilapha ngayo ubesehlale ephukule kungathi bayaqhudelana. Bese ngilinde kuphele unyaka siphele nesivumelwano sethu. Ubesengimi emphinjeni,” kusho yena.
Nokho kakubona bonke o- madam abakhala ngabasizi babo. UNkz Philisiwe “MaGambu” Memela, ongumxhumanisi weDA Kwa-Zulu-Natal, uthi ncinci kaMjoli ngokubuya kowakhe u-anti athi usebe yingxenye yempilo yakhe iminyaka engu-8.
“Akaze nanini angihluphe, uma ehambile ngiyazi nakanjani uzobuya. Angimthathisi okomsizi wasendlini kodwa ufana nodadewethu omncane kimina.” UNkz Memela uthi ike yamshaya kancane ingebhe ngesikhathi emshayela ucingo engaluphenduli. “Lube khona uvalo kodwa bengazi ukuthi ngeke angishiye kanjalo ngoba sinobudlelwano obuvulelekile, sikhululekile. Usebe yingxenye enkulu yomndeni wami, bengehla ngenyuka naye,” kusho yena. Uthi okwenza buqine ubudlelwano babo wukuthi akazinakanga izinto eziningi futhi akabekanga imigomo ezomenza azizwe enengcindezi. “Ngesikhathi efika ngamtshela ukuthi into ebalulekile wukuba anginakele izingane zami aqinisekise ukuthi zidlile, zigezile futhi zivikelekile. “Okunye kwazenzakalela endleleni futhi ngijabulile. Kunabanye abaqashi abafuna ukuba umsizi akuzwe ukuthi uyasebenza, babeke imigomo eqinile yokuthi ikhaya labo lihlanzwa kanjani, njalo njalo. “Bubalulekile ubudlelwano nabantu abasizayo,” kusho yena. Lokhu kugcizelelwa nawumbono kaXoliswa Dilata, kwiMasters Thesis yakhe ethi: Between Sisters’: A Study of Employment Relationship Be tween African Domestic Workers and African Workers lapho ethi ngenxa yendlela esikhuliswe ngayo yokuhlonipha umakhelwane wakho njengodadewenu, umama, ugogo, yileyo ndlela abanye abaqashi abamnyama abaphatha ngayo abasizi babo.
Ucaphune omunye kule-thesis ebuza ukuthi ungamsondeza kanjani emndenini wakho nakubantwana bakho umuntu ongenabo ubudlelwano obuhle naye? Uma uzohlala naye kumele umthathise okwelungu lakho lomndeni.”
Kunomunye obuze ukuthi kungani “bezototoswa” ngoba bayakuholela ukusebenza.
“Sonke siyasebenza, nathi abaqashi bethu kabasitotosi, siyazimisela ngoba sizosebenza yingakho besiholela,” kusho yena.
UBuhle Ncube Moyo onenkampani eqashisa ngo- nanny, iNanny’s in Training uthe imvamisa yezisebenzi ezingaphansi kwenkampani yakhe zincamela ukusebenzela abelungu kunabantu abamnyama.
Uthi zikhala ngokufuku-ziswa kuze kweqe nokuba ngondlovu kayiphikiswa.
ISITHOMBE NGABE: THE BUMP
ABANYE abazali bagcina bephoqeleka ukuzifaka emaDay Care izingane zabo ngoba sebelaxazwe o-nanny ngomzuzu wokugcina ingasekho into abangayenza njengoba nano kusuke kufanele baye emsebenzini.